दैनिक सयौँ अवलोकनकर्ता आउने गोरखा संग्रहालय सुनसान | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
| शनिबार, कार्तिक ८, २०७७
दैनिक सयौँ अवलोकनकर्ता आउने गोरखा संग्रहालय सुनसान
Published On : २४ आश्विन २०७७, शनिबार १०:४१
गत वर्षको यो सिजनमा गोरखा संग्रहालय हेर्न घुम्न सयौँको संख्यामा मानिस आउँथे । त्यसमा पनि यो सिजन विद्यालयहरुको भ्रमण सिजन सुरु हुने समय थियो । जिल्ला भित्र भन्दा बाहिरबाट गोरखा संग्रहालय हेर्न आउनेहरुको लर्को नै लाग्थ्यो । तर यो वर्ष सिजनका बेला संग्रहालय सुनसान छ, बन्द छ ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण संग्रहालय चैत ६ गते देखि बन्द भयो । ‘अहिले हामीले आन्तरिक काम मात्रै गरिरहेका छौँ, सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छैन’ संग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले भने । अझै कहिले खुल्ने भन्ने अन्यौल छ ।
गत वर्ष असोज महिनामा आठ सय ३७, कात्तिकमा नौ हजार चार सय ३१ र मंसिरमा १४ हजार तीन सय ३० विद्यार्थीले गोरखा संग्रहालय अवलोकन गरेका थिए । ‘मुख्य सिजन नै असोज देखि मंसिर सम्म हो’ संग्रहालय प्रमुख अधिकारीले भने ‘यो सिजनमा संग्रहालय खुलेपनि भिजिटर आउने संभावना कम छ ।’
२०७५÷७६ मा ९८ हजार मानिसले अवलोकन गरेका थिए । त्यतिबेला करिब २१ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष चैतको दोस्रो सातादेखि संग्रहालय बन्द हुँदा ७५ हजार पाँच सय ४८ जनाले मात्रै अवलोकन गरे । यस वर्ष अझै घट्ने निश्चित छ ।
संग्रहालयमा भ्रमण आउनेहरु घटेपछि सदरमुकाममा ब्यापार पनि घटेको छ । संग्रहालयको गेट आसपासमा भाडामा लगाइएका गिफ्ट पसलहरु बन्द छन् । लामो समय संग्राहालय बन्द हुँदा घुम्न आउने मानिस नभएकाले बन्द गर्नुपर्दा भाडा तिर्न समेत समस्या भएको गुनासो उनीहरुको छ ।
संग्रहालयले गत वर्ष एक महिनाको भाडा समेत छुट गरिदिएको थियो ।
गोरखा सदरमुकामका होटल, अन्य पसल, गोरखा दरबार आसपासका पुजा पसल, साना होटलको समेत ब्यापार प्रभावित भएको छ । गोरखामा होटल संचालन गर्दै आएका ब्यवशायी मान प्रसाद धितालले भने ‘विद्यार्थी भ्रमण आउँदा गोरखाको चिनोको रुपमा बिभिन्न सामग्री लैजान्थे, दिभर यहाँ रहँदा खाना, खाजा खान्थे, ब्यापार बढ्थ्यो, अहिले सबै ठप्प छ ।’
गोरखा आउनेहरु नेपालको उद्गम थलो गोरखा, पृथ्वी नारायण शाहको इतिहास हेर्न बुझ्न आउने गर्छन । विद्यालय तहको किताबमा पढेको कुरा देख्न, हेर्न गोरखा शैक्षिक भ्रमण वर्षेनी आउने ठाउँ बनेको छ । शाहकालीन इतिहास, भाडाकुँडा, हतियार, बजागाजा, जातजातीको भेषभुसा, संस्कृति, ऐतिहासिक कलात्मक झल्कने फोटोहरु यहाँ हेर्न देख्न पाईन्छ ।